အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ရောင်းချသူများ |ASAKA
round sling သည် အသုံးအများဆုံး ပျော့ပျောင်းသော စလင်းကြိုးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် ယက်ခံနိုင်ရည်ရှိသောအင်္ကျီနှင့် ခိုင်ခံ့မြင့်သောကြိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အဝိုင်းစလင်းကြိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်စွပ်ဖွဲ့စည်းပုံသည် စလောင်းခန္ဓာကိုယ်လည်ပတ်မှုကို ဝတ်ဆင်နိုင်ပြီး စလောင်းဝန်ဆောင်မှု၊ life is long. round sling ကို lifting hooks နှင့် အခြားသော lifting objects များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် အသုံးပြုသည်၊ lifting objects များကို lifting condition အမျိုးမျိုးတွင် အသုံးချနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် မြင့်မားသော strength ရှိပြီး အလင်းနှင့် အရာဝတ္ထု၏ မျက်နှာပြင်ကိုလည်း မထိခိုက်စေနိုင်ပါ။ ပျော့ပျောင်းသောပေါင်းစပ်မှုအမျိုးမျိုးတွင်သုံးနိုင်သည်။ဘေးကင်းရေးအချက်- 6:7:18:1 အရှည်- ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ
ပစ္စည်း-ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသည့် Mueller ရက်ကန်းစင်၊ ဂျာမနီမှ တင်သွင်းသော ဆေးဆိုးစက်၊ ဂျပန်မှ တင်သွင်းသည့် အလိုအလျောက် အပ်ချုပ်စက်ဖြင့် ချုပ်လုပ်ထားသည်။
Art.No. အလုပ်ဝန်ကန့်သတ်ချက် အထူ (မီလီမီတာ) အနံ (မီလီမီတာ) L (မီလီမီတာ)
(ကီလိုဂရမ်) မင်း အရှည် Max အရှည် ၆:၀၁ ၇:၀၁ ၈:၀၁
R01-01 ၁၀၀၀640 ၀.၅ 80 ၀.၃၀ ၀.၃၅ ၀.၄၂
R01-02 ၂၀၀၀750 ၀.၅ 80 ၀.၄၄ ၀.၅၂ ၀.၆၂
R01-03 ၃၀၀၀ 8 60 ၀.၅ 80 ၀.၆၅ ၀.၇၄ ၀.၈၉
R01-04 ၄၀၀၀970 ၀.၅ 80 ၀.၈၃ ၀.၉၁ ၁.၀၉
R01-05 ၅၀၀၀ 11 75 ၀.၅ 80 ၁.၀၁ ၁.၂၉ ၁.၅၅
R01-06 ၆၀၀၀ 12 80 ၁.၀ 80 ၁.၁၉ ၁.၃၉ ၁.၆၇
R01-08 ၈၀၀၀ 13 90 ၁.၀ 80 ၁.၅၀ ၁.၇၅ ၂.၁၀
R01-10 ၁၀၀၀၀ 15 ၁၀၀ 2.0 80 ၁.၉၅ ၂.၂၈ ၂.၇၄
R01-12 ၁၂၀၀၀ 16 ၁၁၀ 2.0 80 ၂.၄၆ ၁.၈၇ ၃.၄၄
R01-15 ၁၅၀၀၀ 18 ၁၂၅ 2.0 80 ၂.၉၇ ၃.၄၇ ၄.၁၆
R01-20 20000 20 ၁၅၀ ၂.၅ 80 ၄.၆၆ ၅.၄၄ ၆.၅၃
R01-25 ၂၅၀၀၀ 24 ၁၈၀ ၂.၅ 80 ၅.၈၄ ၆.၈၂ ၈.၁၈
R01-30 ၃၀၀၀၀ 32 ၂၀၀ ၂.၅ 80 ၉.၂၃ ၁၀.၈၀ ၁၃း၀၀
R01-40 ၄၀၀၀၀ 40 ၂၀၀ ၂.၅ 80 12.10 ၁၄.၂၀ ၁၇း၀၀
R01-50 ၅၀၀၀၀ 45 ၂၂၀ ၂.၅ 80 ၁၄.၁၀ ၁၆.၃၀ ၁၉း၆၀
R01-60 ၆၀၀၀၀ 65 ၂၄၀ 4.0 80 ၁၇.၃၀ 20.20 24.20
R01-80 80000 70 ၂၆၀ 4.0 80 22.20 25.90 ၃၁၊၁၀
R01-100 100000 80 ၂၉၀ 4.0 80 ၂၆း၀၀ 30.30 ၃၆.၄၀
R01-200 200000 ၁၂၀ ၄၅၀ ၅.၀ 80 55.00 ၆၄.၁၀ ၇၇.၀၀
R01-300 300000 ၁၆၀ ၅၂၅ ၅.၀ 80 ၇၉.၀၀ ၉၂၊၂၀ ၁၁၀.၆၀
R01-400 400000 ၂၀၀ ၆၇၀ ၅.၀ 80 ၉၈.၄၀ ၁၁၄.၈၀ 137.80
R01-500 500000 ၂၂၀ ၇၅၀ ၈.၀ 80 121.20 ၁၄၁၊၄၀ 169.70
R01-600 600000 ၂၄၀ ၈၂၀ ၈.၀ 80 ၁၄၅.၀၀ 169.20 203.00
R01-700 700000 ၂၆၀ ၈၇၀ ၈.၀ 80 168.00 ၁၉၆.၀၀ ၂၃၅၊၂၀
R01-800 800000 ၂၈၀ ၉၃၀ ၉.၀ 80 192.00 224.00 268.80
R01-900 ၉၀၀၀၀ ၃၀၀ ၉၉၀ ၉.၀ 80 215.00 250.10 ၃၁၀၊၁၀
R01-1000 1000000 ၃၂၀ ၁၀၅၀ ၉.၀ 80 ၂၃၈.၀၀ ၂၇၇.၇၀ ၃၃၃။၂၀
ယခင်- China Manual Hand Chain အတွက် Quots Sectional Roller Shutter Door Manual Chain Hoist 1 5/16 Roll up Garage Door Chain Hoist for Sectional Door
နောက်တစ်ခု: အရည်အသွေးမြင့် CE Standard Manual Chain Hoist
CE လက်မှတ် အရည်အသွေးမြင့် polyester အပြား ကျွန်ုပ်တို့...